एभोकाडो फलको खेती गर्ने तरिका | दर्पण दैनिक
एभोकाडो फलको खेती गर्ने तरिका
प्रकाशित मिति: २०७६ मंसिर १५ गते ०९:३२
खेती प्रबिधि :
एभोकाडो (Avocado) लाई नेपालीमा घिउ फल (Butter Fruit)भनिन्छ ।
मध्ये अमेरिका र मेक्सिको मा उत्पति भएको उष्ण प्रदेशीय यो एक राम्रो नगदे फल हो ,यो फलको बैज्ञानीक नाम “पेर्से अमेरिकाना Persea Americana”हो ।
सबै भन्दा बढी एभोकाडो उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा मेक्सिको पर्छ ।
प्रयाप्त मात्रामा स्वस्थ्यका लागि लाभदायक फ्याट र कार्बोहाइड्रेट हुने भएकाले एभोकाडो खानुका थुप्रै फाइदा छन् ।
नेपालका विभिन्न ठाउँमा एभोकाडो फलेको पाइएपनि मानिसहरुले यसको महत्व नबुझेकाले सेवन गर्दैनन् !
नेपालमा व्यावसायिक सोचका साथ एभोकाडोमा लागेकाहरूले पाखोबारी, कान्ला र खोला छेउमा समेत यसको बिरुवा हुर्काइरहेका छन् ।
पाखा ,खोला बगर वा अरू काम नलाग्ने ठाउँमा एभोकाडो लगाएर राम्रो आय लिन सकिन्छ !
नेपालका पहाड,तराई, खोंच, बेंसी, मध्यपहाड र भित्री मधेशमा एभोकाडो मजाले फल्छ ।
एभोकाडो हुर्काएपछि 50 वर्षसम्म फल दिन्छ, बिरुवा लगाएको3देखि5वर्षमा फल दिन शुरू गर्ने यसको एउतै बोटमा 1हजार किलो (1 सयदेखि5सयओटा फल)सम्म फल्न सक्छ ।
समुन्द्र सतह बाट 2500 मिटर सम्म एस्को खेती गर्न सकिन्छ ।
माटोको पी एच 5.5 देखि 6.5 भएको ठाउमा राम्रो हुन्छ ।
फल टिपेको5देखि 10 दिनमा फल पाक्ने गर्छ ।
श्रावन देखि कार्तिक मंगसिरसम्म टिपिने यो फल को मुख्य सिजन भने भाद्र- असोज हो ।।